Azerbaijan: Mipoitra ny fahanginana satria nokendrena ho faty ny mpikambana iray hafa ao amin’ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ · Global Voices teny Malagasy
Manadihady ilay bilaogera ny manampahefana noho ny fandrisihana an-karihary fankahalana
Voadika ny 21 Septambra 2021 3:45 GMT
Ny “fototra ara-dalàna mazava ilaina hiadiana amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy” avy amin'ny Parlemanta Eoropeana, nampiasana lisansa CC BY-NC-ND 2.0
Mbola sarotra ho an'ireo vondrom-piarahamonina LGBTQ+ any Azerbaijan ny miatrika izany. Fa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay no tena nampihorohoro indrindra. Iray volana mahery kely taorian'ny fanafihana ny mpikambana sasany tao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+, niteraka resabe momba ny fankahalana pelaka lalina miorim-paka ao amin'ny firenena ny tantaran'ny tovovavy niova fananahana iray novonoina tamin'ny volana Aogositra, ny tsy fisian'ny fepetra fiarovana hanohanana ny olona LGBTQ+, ary ny tsy fahombiazan'ny governemanta tamin'ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny herisetra sy ny fankahalana.
Vehivavy niova fananahana iray, Nuray, vao 27 taona monja no niharam-boina vao haingana indrindra. Hita tamin'ny 22 Aogositra ny fatiny nodorana, tao amin'ny distrika iray tao an-drenivohitra. Tratran'ny polisy ny nahavanon-doza, Mirshahid Mehdiyev, 36 taona, izay nosamborina niaraka tamina lehilahy iray hafa noho ny firaisana tsikombakomba tamina famonoana olona.
Fotoana fohy taorian'ny nahitana ilay niharam-boina dia nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny biraon'ny polisy ao amin'ny distrika sy ny tranon'ny mediatora ny vondrona mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBTQ+. Nangataka tamin'ny Minisiteran'ny Atitany ihany koa izy ireo mba handray ny andraikiny momba ilay bilaogera Huseynova, izay nanjary nalaza ny horonantsariny farany taorian'ny niantsoany ampahibemaso ny hanaovana herisetra amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina niova fananahana, anisan'izany i Nuray.
Nolavin'i Huseynova haingana ireo fiampangana ireo. Araka ny filazan'ny OC Media, nilaza ilay bilaogera fa “namarana ity fahamenarana ity” izy, raha niresaka ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina niova fananahana, ary tokony hopotipotehina toy ny lalitra ireo toa an'i Nuray hoy izy.
Fahita mahazatra ny horonantsarin'ilay bilaogera mikendry ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+. Vao tsy ela akory izay, tao amin'ny iray tamin'ireo lahatsorany mivantana tao amin'ny Instagram, nangataka tamin'ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana i Huseynova mba tsy hijery akory mikasika ny trangana heloka bevava amin'ny fankahalana. “Fambara dia efa ampy, lazao fotsiny anay, ary izahay vahoaka, no hanafoana azy ireo tsikelikely.”
Miantso ny olona hanafoana ny vondrom-piarahamonina niova fananahana sy ny hikipian'ny sampan-draharaham-panjakana maso amin'ny heloka bevava atao amin'ny vondron'olona ao Azerbaijan ilay antsoina hoe bilaogera sady fasista Sevinj Huseynova.
Tamin'ny horonantsary iray hafa, nivoady i Huseynova fa hanapotika ny vehivavy niova fananahana raha sy isaky ny mihaona amin'izy ireo izy ary miantso ny mpijery azy hanao toy izany koa. “Avy eto aho dia miantso anareo lehilahy, anadahy sy ny vehivavy, vonoy izy ireo na aiza na aiza hahitanareo azy ireo.”
Nilaza i Elshad Hajiyev, mpitondr tenin'ny Minisiteran'ny Atitany raha namaly ny fanontanian'ny fampitam-baovao fa efa fantatry minisitera ny fisian'ny horonantsary ary eo am-panaovana fanadihadiana izy ireo.
Voasazy araka ny fehezan-dalàna momba ny heloka ara-pitantanam-panjakana sy eo ambany fehezan-dalàna momba ny heloka bevava andininy faha 283.1 ihany koa ny fandrisihana herisetra. Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny JamNews, dia nanazava ny mpisolovava Samed Rahimli fa raha misy olona hita fa meloka amin'ny fandrisihana fankahalana sy ny fandrafiana amin'ny fampitam-baovao, amin'ny resaka foko, finoana, firazanana, na sosialy, dia mety hiatrika fandoavana lamandy 8 000–12000 manats (4,700 –7.060 dolara amerikana) eo ho eo, asa an-terivozona hatramin'ny roa taona, na fampidirana am-ponja hatramin'ny 4 taona ilay meloka. Ary mety higadra hatramin'ny 5 taona ilay meloka amin'ny tranga izay ahitana heloka bevava miaraka amin'ny fampiasana herisetra, na misy fandrahonana herisetra.
Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, nataon'i Sevinc Huseynova ho tsy azon'ny rehetra hojerena ny kaontiny Instagram nefa nanokatra iray hafa faharoa (izay tsy azon'ny rehetra hojerena ihany koa) izy raha toa ka hakatona ny kaontiny voalohany izay ananany mpanjohy miisa 18.000.